Imihlinzo: Maths teacher drunk in class - imihlinzo
Imihlinzo: Maths teacher drunk in class
0 Comment Aug 18, 2014
Masizibulisele kwakhona mzi-ontsundu…siya themba impela veki niyichithe kamnandi.
Masikhe sive ukuba iSkeem sithini namhlanje 🙂
OoMama banele kukunga fumaneki kwabantwana babo kwiCellphone xa bebakhangela
Kuthiwa kukho umama oyewadinwa kukungamfumani unyana wakhe efowunini. Weza necebo elinoku khulula nabanye abazali kulentlungu yoku phendulwa kwefowuni xa bethanda abantwana. LeApp kuthiwa iyayi vala ifowuni ingakwazi ukwenza kwanto, iyaku vuleka ngoku’ske afowunele umzali wakhe. Xa iqhotyoshiwe akanaku kwazi ukwenza kwanto kuyo…into nje emchazela yona kukuba makafowunele umzali wakhe. Yeey! Iphucukile mpela, kuza kutsho kukhululeke abazali ebebe xakiwe yilento…isisombululo side safumaneka.
Unomdla woku zenzela eyakho iApp ngenye imini? Ungakwazi nawe ukuba nayo, khawu jonge apha.
Kukho isibini esitshate kayi 66 kule minyaka emithathu idlulileyo
Couple married 66 times
Esisibini sithe sakutshata okokuqala safumanisa ukuba man imnandi into. Baze emveni koko bathatha isigqibo sokuba baza kutshata emazweni onke abanako ukufikelela kuwo. Balityhutyhile ke eli besenza lemitshato, bebekhe bafika ke phofu kwalapha eMzantsi Afrika. Eyona nto ke phofu ekhuthaze lento kwesisibini ngumdla woku bawela ukuzivela imitshato yezinye intlanga.
Utisharakazi wase eArizona utyholwa ngokuya emsebenzini emnyama-tixi 🙂
Maths teacher drunk in class
Lotisharakazi ubanjiwe ke ngolwesithathu emveni kokuba kufumaniseke ukuba uze emsebenzini emnyama-tixi. Phofu kwa ukuza kwakhe kwase msebenzini uze ehamba ngeTaxi kuba ebeziva ukuba uyengamandla. Ubhaqwe ngabantwana eklasini ukuba man usuke wanento ethethela phezulu namhlanje, kwaye unazo nendawo ezibathukayo. Besa jonge leyo, baqhaphela ukuba unento eman’ itshona kwenye yezi drawer zedesika yakhe. Bathe ke baku qonda ukuba ayise ngangabo le imeko, babiza inqununu yesisikolo ukuba mayikhe izoku jonga lento bayi cingelayo…
Enkosi kwa khona ngokuba nithe nazo kuzingcamlela kulomthombo wemihlinzo…sakube sibonane ngomso 🙂
Bonus video: World’s most funny video ever
‹ Ababhafayo namhlanje: 15 August 2014	› Imihlinzo: Jewish amputee sues hospital after a successful operation